Qargistan (Кыргызстан) Rush ahaan, Waa dal ku yaala Eshiyada dhaxe waxa ay xad la leedahay shiinaha, Tajakistan,uzbakistan iyo Qasagistan, Magaala madaxdeedu waa Bashkik. 1991 waxa ay ka xuroowday Midowgii soofiyeet. (ˌKɜːrɡɪstɑːn / KUR-gih-STAHN;  Kyrgyzstan: Kyrgyzstan (Kyrgyzstan): [qɯrʁɯsstɑn]); Ruush: Kirgiziya [kʲɪrɡʲizʲɪjə] ama Kyrgyzstan [kɨrɡɨstan] Kiriqiyaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jam. Waxaa ka xayiray Kazakhstan, waqooyiga, Uzbekistan, dhanka galbeed iyo koonfur galbeed, dalka koonfur galbeed iyo Shiinaha oo ku yaalla bariga, magaaladeeda iyo magaalada ugu weyn waa Bishkek. Taariikhda diiwaangalinta ee Kyrgyzstan ayaa ku jirta 2,000 oo sanno, waxa ku jira dhaqanno kala duwan iyo boqortooyooyin. Inkastoo juquraafi ahaan ay go'doomiyeen dhulalkoodii aadka u sarreeyay, taas oo gacan ka gaysatay ilaalinta dhaqankeedii qadiimiga ahayd, Kyrgyzstan waxay ku jirtay isbeddelada dhowr quraan oo waaweyn oo qayb ka ah waddooyinka Waddooyinka iyo jidadka kale ee ganacsiga iyo dhaqanka. In kasta oo ay muddo dheer ku nooleyd qabaa'il madaxbannaan iyo qabaa'illimo, haddana Kyrgyzstan ayaa si ku-meel-gaar ah u dhacday xukunka shisheeye isla markaana ay u dhalatay dawlad qaran-dawlad kaliya ka dib burburkii Midowga Soofiyeedka 1991-kii. Tan iyo markii madax-bannaanida, Kyrgyzstan waxay si rasmi ah u ahaan jirtey jamhuuriyad baarlamaan oo midaysan, inkastoo ay sii wado in ay adkeyso isku dhacyada qowmiyadda,   kacdoonka,  dhibaatooyinka dhaqaale,   17] Kyrgyzstan waa xubin ka mid ah Dawlada Federaalka Ku-Meel Gaarka ah, Ururka Midowga Yurub, Ururka Iskaashiga Amniga Wadajirka, Ururka iskaashiga Shiinaha, Ururka Iskaashiga Islaamka, Golaha Turkiga, Beesha Türksoy iyo Qaramada Midoobay. Qowmiyadaha qowmiyadaha kala duwan ee reer galbeedka waxay ka kooban yihiin 6 milyan oo qof. Giriiggu wuxuu aad ugu dhow yahay luuqadaha kale ee Turkiga, inkastoo Ruushku uu si ballaaran u hadlay oo uu yahay luqad rasmi ah, oo ah dhaxal qarnigii Ruushka ah. Inta badan dadka ayaa ah muslimiin aan diin ku lahayn.  Marka laga soo tago asalkiisa Turkiga, dhaqanka Kiristaanka wuxuu ka kooban yahay qaybo ka mid ah saamiga Farsiga, Mongolian, iyo Ruushka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qargistan&oldid=197955"
Last edited on 23 Diseembar 2019, at 00:11
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Diseembar 2019, marka ee eheed 00:11.